Akara mpempe akwụkwọ bụ Nduzi na igbochi na wepụ ntanetị nchịkọta Google
Spam nchịkọta abụghị okwu ọhụrụ, ma ọ dị nso na nso nso a, ọ dị njọ karịa mgbe ọ bụla. N'ebe a, ọkachamara ọkachamara Semalt , Lisa Mitchell, ga-akọwa ụzọ ụfọdụ nke igbochi ma wepụ spam Google Analytics. Ị ga-enwekwa ike ịma otú ha si emetụta saịtị gị - registrations dd network inc.
Ihe mbụ ị ga-achọ ịma bụ na spam nchịkọta na-abịa n'ụdị dị iche iche: spam na spam. Ụdị abụọ a na emetụta Google Analytics gị. Ya mere, ụzọ isi mesoo ha kwesịrị ịdị iche, na ilekwasị anya ga-abụ otu esi ewepụ ha kpamkpam.
Gịnị bụ bot spam?
Ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ spam bot bụ ihe na-adịkarị njọ na dị ize ndụ karịa ka ị ga-atụ anya. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, o buola ihe karịrị okpukpu abụọ na ebe nrụọrụ weebụ ebe ọ bụ na okporo ụzọ dị ala. Ọ bụghị niile bọọlụ dị ize ndụ ma ọ bụ dị njọ, ọ bụ ezie na. Google, Bing, na nnukwu ụlọ ọrụ ọchụchọ na-adabere na bọtịnụ ọchụchọ mgbe ọ na-abịa n'ịgba na ịkọwa ọdịnaya na weebụsaịtị. Ndị na-ere ahịa ahịa dị ka SEMrush, Pinterest, ndị na-eri nri dị ka FeedBurner, Twitter, yana bots na nlekota dịka WordPress, Robot Uptime, dị mma ịga. Ma, ị ga-eme ike gị niile iji wepu bọọlụ spam ndị na-achọ ịbibi saịtị gị ruo ogologo oge.
Spam bots ma ọ bụ spam crawler bụ mmemme a na-eme iji rụọ ọrụ dị iche iche, dị ka izu ohi ọdịnaya na data, nkesa nkesa, spamming nke kwuru, ọgụ phishing, na DDoS ọgụ. dị ka ngwá ọrụ hacking, ndị na-adịghị emepụta ihe, ndị na-achọpụta ihe na-ezighị ezi, na ndị na-ahụ maka ihe nkiri. dị iche iche na malware na nje virus afọ abụọ gara aga, Google kwuru na ọ bụ ebe a ka a na-etinye ọnụọgụ abụọ na ọnụọgụ weebụ site na mbipụta a. eji bọọlụ gbasaa ọdịnaya nkwalite na ụdị phishing njikọ na nkọwa.
E nwere ụzọ dị iche iche iji gbochie ma wepu bots na spam. A tụlere ụfọdụ n'ime ha n'okpuru ebe a.
Mkpụrụ akpaaka akpaaka / nkwụnye ududo
Google gosipụtara atụmatụ a ọnwa ole na ole gara aga. Ọ na-ahapụ gị ka ịlele ma gbochie okporo ụzọ nke na-abịa site na adreesị IP adighi. Ị nwere ike iwepu spiders na bọọlụ na ụdị a. Ị nwere ike ịmepụta ihe nzacha na IAB / ABC International Spiders & Bots list. Ihe nkwụnye ihe ntanetị bụ ihe kachasị ike iji chebe bọtịnụ bot dịka saịtị dị iche iche eritela uru na ya. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma nye gị ezigbo nsonaazụ.
Block Bots Iji .htaccess
Ụzọ ọzọ bụ igbochi bọọlụ site na iji faịlụ .htaccess. Ntọala ntinye aka nchịkọta a na-enye aka wepu bots ịga leta Google Analytics. Ọ na-egbochi mbata nke bọọlụ, ma ọ pụghị ịbụ ngwọta na-adịgide adịgide maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere mgbagwoju anya ma ọ bụ ajụjụ banyere ihe ngwọta e nyere ebe a, ị nwere ike ịbịakwute anyị site na nkọwa nke dị n'okpuru ebe a.